ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား)| December 7, 2012 | Hits:1
| | မြန်မာ ဘောလုံး အကယ်ဒမီမှ သင်တန်းသားများ ဘောလုံး လေ့ကျင့်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
မြန်မာအမျိုးသမီး လက်ရွေးစဉ်အသင်း အာရှပွဲမှာ ဘာကြောင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုသလဲအာဆီယံ ယူ ၁၉ ပြိုင်ပွဲ မြန်မာအသင်း အင်ဒိုကို ဂိုးပြတ်သွင်းပြီး အကြိုဗိုလ်လုပွဲတက်သမိုင်းဝင် အောင်ဆန်းအားကစား ပြိုင်ဝင်းယူ-၁၉ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဘောလုံးလောကသစ် ထူထောင်ကြစို့PR စနစ်ဖြင့် ကျောင်းတွင်း အားကစား လူရွေးခြင်း
Pyae Phyo Kyaw December 7, 2012 - 11:11 am Myanmar got group winner in 2004. Not group runner
Reply konay man December 7, 2012 - 3:53 pm ဆရာထွေးတို့ ကလည်း သူခိုးပြေးမှ ဓပြမှန်းသိ၊ ကျောချမှ တက်တူးထတယ်။
Reply aungkhin December 8, 2012 - 12:11 pm ဘာကစားကွက်မှ မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ ကိုတင်မြင့်အောင် တစ်ယောက် လေကျယ်နေတာ ကို တာဝန်ရှိသူများ ၊ အားကစား ကလောင်ရှင်များ သတိပြုနိူင်ကြပါရဲ့လား
Reply naing December 9, 2012 - 7:23 am What I understood was FIFA not allowed Myanmar to host the home game in 2005 due to political situation, not the Myanmar football federation.
Reply arthit December 9, 2012 - 7:55 pm အခုမှသိပြီလား ။ အရင်တုံးကအကြောင်းတွေချည်းဘဲ ပြန်ပြန်ပြောမနေပါနဲ့တော့ ဆရာခင်မောင်ထွေးရာ ။ မြန်မာ့ ဘော်လုံးအသင်း(အမျိုးသား) ရဲ့အဆင့်ဟာ အာရှအဆင့်မပြောပါနဲ့ ၊ အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်မှာတောင် လာအို ၊ ကမ္ဘောဒီးယား တို့နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းဆိုတာ လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါ ။ အခု ဖိလစ်ပိုင်ကို မနိုင်တော့ဘူး ။ နောက်ဆိုရင် အရှေ့တီမော နဲ့ လာအို ကို နိုင်အောင် ၊ အုပ်စုကကျွတ်အောင် မနည်းကန်ရတော့မယ် ။ အားပေးတဲ့ သူတွေ လျှာထွက်မယ် ။ ပံ့ပိုးတဲ့သူတွေ မွဲတော့မယ် ။ တော်သေးတယ် ။ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ နဲ့ ဘော်လုံးအသင်းပိုင်ရှင် တွေ တစ်သက်စားမကုန်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေရှိထားလို့ ။ ဆရာ့ရဲ့ ရွှေထီးဆောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ရလွန်းလို့ ဆက်ပြီးလည်း မရေးပါနဲ့တော့လို့ တောင်းပန်ပါတယ် ။
Reply AKN December 10, 2012 - 10:09 am Indeed, Myanmar had Golden years in the decade of 1960 & 70. Myanmar National team as well as Youth teams annexed number of trophies at that times. I remember I just waited for the glorious song “Myanma Naing Pyi” from “Myanma Ah Than” on the days they played for Finals. Now I really missed our heroes like Bahadur, Hla Htay, Aung Khin, Aye Maung Gyi and their outstanding colleagues.
Reply Shwe Yoe December 10, 2012 - 2:19 pm Khin Nyunt is unemployed and available now. Why don’t we ask him to coach the Myanmar Team because he was touting in the past that Myanmar sports would dominate the world. Annoying Khin Nyunt must come out and coach these losers.
Reply ဗမာ December 11, 2012 - 4:22 pm သူများနဲ့ယှဉ်ပြီးမပြေးနိုင်တဲ့သူ၊ သူများနဲ့ယှဉ်လုရင်အမြဲတမ်းလဲပြီးကျကျန်နေခဲ့တဲ့သူ၊ ဦးနှောက်သုံးပြီးမကစားတတ်တဲ့သူတွေ မြန်မာ့ဘောလုံးအသင်းမှာထည့်ထားသေးသရွေ့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဆင့်အတန်းဟာ ပွဲဖြည့်အသင်းအဖြစ် ဘိတ်ချီးမှာပဲရောက်နေအုံးမှာပါ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်… နောက်ဆုံးမှာရောက်နေရတဲ့အတွက်… ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘေးကင်းလို့ပါ။